कर्मचारीको तलब बढ्यो,अब कुन कर्मचारीले कति पाउँछन् ? (सूचिसहित) - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
कर्मचारीको तलब बढ्यो,अब कुन कर्मचारीले कति पाउँछन् ? (सूचिसहित)
प्रकाशित मिति: १५ जेष्ठ २०७६, बुधबार May 29, 2019
काठमाडौं । सरकारले कर्मचारीको तलब बढाएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट मार्फत् राजपत्राङ्कित र राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीको तलब फरक फरक दरमा बढाएका हुन्। अर्थमन्त्रीका अनुसार साउत १ देखि लागू हुनेगरी राजपत्र अनन्तकृत श्रेणीका लागि २० र राजपत्र अंकित श्रेणीका कर्मचारीका लागि १८ प्रतिशत बृद्धि गरिएको छ। यस्तै पोसाक लगायतका भत्ता यथावत राखिएको छ ।
राजपत्राङ्कित कर्मचारीको १८ प्रतिशत र राजपत्र अनाङ्कित कर्मचारीको २० प्रतिशत तलब बढेको हो। वृद्धि भएको तलब प्रतिशतलाई आधार मान्ने हो भने अब मुख्य सचिवको तलब ६५ हजार हुनेछ। त्यस्तै सरकारी अधिकृतको तलब अब ३५ हजार ९ सय हुनेछ। कार्यालय सहयोगीको तलब १९ हजार ४ सय ७४ हुनेछ।
हलकाराको पाँचौ स्तरको २७४५६, चतुर्थ स्तरको २४७०८, तृतीय स्तरको २३२०८, द्वितिय स्तरको २१८२८, प्रथम स्तरको २०६७६ पुगेको छ । साथै हुलाकीहरुको पाँचौ स्तरको २६८०८, चतुर्थ स्तरको २४०६०, तृतीय स्तरको २२२२४, द्वितिय स्तरको २०८५६, प्रथम स्तरको १९८९६ पुगेको छ । त्यस्तै, हेभी सवारी चालक पाँचौ स्तरको ३४४१०, चतुर्थ स्तरको ३२६१६, तृतीय स्तरको ३०७२०, द्वितिय स्तरको २६९८८, प्रथम स्तरको २३८४४ पुगेको छ । हलुका सवारी चालकको पाँचौ स्तरको ३२६१६, चतुर्थ स्तरको ३०७२०, तृतीय स्तरको २६९८८, द्वितिय स्तरको २३८४४ र प्रथम स्तरको २२००८ पुगेको छ । कार्यालय सहयोगीको पाँचौ स्तरको २६५६८, चतुर्थ स्तरको २३८४४, तृतीय स्तरको २२००८, द्वितिय स्तरको २०६७६, प्रथम स्तरको १९४७६ पुगेको छ ।
काठमाडौं, २३ भदौ । प्रमुख तीन दल आगामी फागुन–चैतभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सहमत भएका छन् […]
फोरम पनि सरकारमा सहभागी हुने, ओली, प्रचण्ड र उपेन्द्रबीच भयो यस्तो लिखित सहमति
काठमाडौं । संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) का अध्यक्ष एवं […]
‘प्रेम र विवाह मेरो प्राथमिकतामा छैन’
१२ वर्षको उमेरमा बलराम कोइरालाको शब्द एवं बुबा जिवेश राईको संगीतमा पहिलो पटक 'हिमालको काख' बोलको गीत रेकर्ड […]
नेपाली बा-आमा को सिड्निमा सामुहिक भ्रमण
असनेपालन्युज सिड्नी । अष्ट्रेलियामा भ्रमण भिषामा आईपुग्नु भएका अभिभावकहरूले अस्ट्रेलियाको विभिन्नस्थानमा […]